Hotel Projects International - Armati Hotel Project Asia
NgoLwesibini, Februwari 2, 2016 9: 19: 31 AM America / Los_Angeles
Omnye Armati 5 uqalise iprojekthi Ihotele eThailand, kwelaseAsiya, bamkelekile ukuba atyelele kule hotele ukubona kwetephu yethu.
Armati 541 series kwetephu catalouge nceda khangela zilandelayo:
Wamkelekile kwi Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers, nene- ihotele 5-inkwenkwezi ibekwe eyinkunzi Thailand i-Bangkok. Imi kwicala Enchanting Chao Phraya River, zonke kumagumbi ethu 726 yeendwendwe ukubonisa izimvo emlanjeni ingasithwanga.
Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers inikezela 28,000 iinyawo esikweri inkomfa kunye intlanganiso izibonelelo, kwakunye neendawo iziganeko ezinamagama kwaye angasokuze kunye nemitshato. Komulela nentsapho okanye abahlobo kwelinye offour zokutyela, okanye ukubamba shuttleboat afezekise ukuba Bangkok isibhakabhaka uloliwe ukufumanisa ngakumbi umboniso lokutyela amakhulu eso sixeko. Ezimbini Resort-style kumadanyana, yokuzivavanya ezolileyo, kwinkundla intenetya, imiyezo ashinyeneyo kucamngca ungakukhuthaza ukuba waneliseke nokuqinisekisa kukuhlala ongalibalekiyo xa 5-star engasemlanjeni Bangkok hotel yethu.